၃ ယောက်သာ လွတ်မြောက်မည် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၉ ခုနှစ်ထုတ် ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ
၃ ယောက်သာ လွတ်မြောက်မည် (ထိုင်း:3Will Be Free – สามเราต้องรอด; RTGS:3Will Be Free – Sam Rao Tong Rot) သည် Lapassalan Jiravechsoontornkul (Mild)၊ Way-Ar Sangngern (Joss) နှင့် Tawan Vihokratana (Tay) တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား​သော ၂၀၁၉ခုနှစ် ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
"ฝากเวลา" (Fahk Welah) by The White Hair Cut
၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (၂၀၁၉-၀၈-၀၉) – ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (၂၀၁၉-၁၀-၁၁)
ဒါရိုက်တာ Tidakorn Pookaothong ရိုက်ကူးပြီး GMMTV နှင့် Trasher Bangkok တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်​​သော ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ရက်​နေ့တွင် GMMTV မှ ပြုလုပ်​​သည့် "Wonder Th13teen" ပွဲစဉ်အတွင်း ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့​​သော ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၃ ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲကို One31 နှင့် LINE TV တို့တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ရက် ​နေ့မှ စတင်ကာ အပတ်စဉ် ​သောကြာ​နေ့ ၂၂:၃၀နာရီနှင့် ၂၃:၃၀နာရီတို့တွင် ပြသသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလ ၁၁ရက် ​နေ့တွင် ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးဆုံးခဲ့သည်။
၃ ဆုများနှင့် ဆန်ခါတင်စာရင်း
​အောက်​ဖော်ပြပါများသည် ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွင် ပါဝင်​သော သရုပ်​ဆောင်များဖြစ်သည်။
• Lapassalan Jiravechsoontornkul (Mild) as Miw
• Way-Ar Sangngern (Joss) as Neo
• Tawan Vihokratana (Tay) as Shin
• Watchara Sukchum (Jennie) as Mae
• Chanagun Arpornsutinan (Gunsmile) as Tur
• Natthawut Jenmana (Max) as Phon
• Pumipat Paiboon (Prame) as Luang
• Suphakorn Sriphothong (Pod) as Leo (Neo's brother)
• Jirakit Kuariyakul (Toptap) as PP
• Sivakorn Lertchoochot (Guy) as Touch
• Harit Cheewagaroon (Sing) as James
• Naphon Phromsuwan (Stop) as Boss John
• Sarut Vichitrananda (Big) as Sia Thana
• Inthira Charoenpura as Vanika (Thana's Wife)
• Sarocha Watitapun (Tao)
• Penpak Sirikul as Miw's mother
• Arisara Wongchalee (Fresh)
• Krittanai Arsalprakit (Nammon) as Ken
• Theepisit Mahaneeranon (Frame)
• Pronpiphat Pattanasettanon (Plustor) as Nurse/Hitman
ฝากเวลา Fahk Welah The White Hair Cut 
2020 LINE TV Awards Best Kiss Scene3Will Be Free ဆန်ကာတင် 
↑ "3 Will Be Free สามเราต้องรอด" ก่อนใคร "เต, จอส, เจนนี่ ฯลฯ" นำทีมพูดคุย สุดเอ็กซ์คลูซีพ!!!။ Spring News။
↑ เปิดตัว 13 ซีรีส์ใหม่ 2019 แฟนๆ สายวายเตรียมตัวฟินตลอดทั้งปี (in th)။
↑ "จีเอ็มเอ็มทีวี" จัดใหญ่ เปิดตัว 13 ซีรีส์ใหม่ ปี 2019။ Spring News။
↑ "มายด์-เต-จอส" ฟาดฟันฝีมือระทึกดุเดือด!!! ในซีรีส์ "3 Will Be Free สามเราต้องรอด" เริ่ม9สิงหาคมนี้။ GMMTV။[လင့်ခ်သေ]
↑ เต เครียดจัด!!! มายด์ โดนใบสั่งจับตาย ลุ้นระทึกส่งท้าย3Will Be Free สามเราต้องรอด (in th)။ News Plus (9 October 2019)။ 12 October 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 April 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "มายด์-เต-จอส" ฟาดฟันฝีมือระทึกดุเดือด!!! (in th)။ News Plus (9 August 2019)။7April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 April 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑3Will Be Free สามเราต้องรอด [Official Trailer]။ GMMTV (9 July 2019)။
↑ ฝากเวลา Ost.3 Will Be Free สามเราต้องรอด - The White Hair Cut။ GMMTV Records။
↑ LINE TV AWARDS 2020 รางวัลในปีนี้จะเป็นของใคร (in th)။ Beartai (15 February 2020)။
↑ สรุปผลรางวัล LINE TV AWARDS 2020 กลัฟ-มิว, โอม-สิงโต, ออฟ-กัน และบ้านนาดาว คว้ารางวัลเรียกเสียงกรี๊ดได้ตามคาด (in th)။ The Standard (20 February 2020)။
3 Will Be Free on One31 website (in ထိုင်း)
3 Will Be Free on LINE TV
အိုင်အမ်ဒီဘီပေါ်ရှိ ၃ ယောက်သာ လွတ်မြောက်မည်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၃_ယောက်သာ_လွတ်မြောက်မည်&oldid=695520" မှ ရယူရန်
၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။